mardi, 10 mars 2020 21:26
Coronavirus: Atsahatra avokoa ireo fifaninana ara-panatanjahatena iraisam-pirenena
Araka ny toro-marika manokana nomen'ny Filoham-pirenena tamin'ny filan-kevitry ny minisitra ny 04 mars teo dia atsahatra aloha ireo fifaninana iraisam-pirenena ho fiarovana momba ny valan'aretina coronavirus. Mihantona toy izao koa ny fandehanana any ivelany ho an'ireo Atleta isan-tsokajiny. Raha misy antony manokana dia azo jerana ireo fepetra tsy maintsy ho raisina.
Lavon’ny Sénégal tamin’ny isa 1 no 0 i Tonizia, tamin’ny lalao famaranana ny « Coupe Arabe U20 » tany Arabia Saodita, androany, baolina matin’i Samba Diallo. Lasan’i Sénégal ny amboara, i Sénégal izay sambany nandray anjara tamin’ity fifaninanana iraisam-pirenena ity. Niisa 16 ireo ekipam-pirenena nandray anjara tamin’ity « Coupe Arabe U20 » ity, anisany ny Barea an’i Madagasikara. Tsy nahadingana ny fifanintsanam-bondrona ny Barea tamin’ireo lalao telo vitany, nahazoany fandresena iray nanoloana an’i Djibouti, ary faharesena roa nanoloana an’i Maroc sy Bahreïn. (Jereo Sary Tohiny)